November Holiday 2018 Vipassana Meditation Retreat
(3) Days Vipassana Meditation Retreat
Dear All Devotees
We would like to arrange including National Day with (3) days Vipassana Meditation Retreat as per following program. All yogis are cordially invited.
Venue : Chanmyay Yeiktha Meditation Centre, 103 Verde View, Singapore 688708.
Date : 10 September 2016 - 12 September 2016 (8:30 AM - 6:00 PM)
Registeration to contact to
Ms Kyu Kyu Hlaing at 9799 6503.
Ms Mya Wut Yee - 9138 9712
စင်္ကာပူနိုင်ငံ (3)ရက်တာ ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲကို ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ၊ အမှတ် 103 Verde View, Chua Chu Kang North (5), Singapore 688708 တွင် နေ့စဉ်နံနက် 8:30 နာရီမှ ညနေ 6:00 နာရီ အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဒေါ်ကြူကြူလှိူင် - 97996503 နှင့် ဒေါ်မြဝတ်ရည် - ၉၁၃၈ ၉၇၁၂ ထံ ဆက်သွယ်စာရင်း ပေးသွင်းကြပါရန်။
Chanmyay Yeiktha Meditation Center (Singapore)